ကျွန်တော်တို့ အားကိုးရသူကြီးရဲ့ သမိုင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ကျွန်တော်တို့ အားကိုးရသူကြီးရဲ့ သမိုင်း
ကျွန်တော်တို့ အားကိုးရသူကြီးရဲ့ သမိုင်း
Posted by woo warr on Jul 4, 2012 in Computers & Technology, Know-How, DIY | 19 comments
အားကိုးရသူကြီးဆိုလို့တခြားမထင်ပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခိုင်းအစေကြီး Microsoft Windows OS ကိုဆိုလိုတာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ် အလုပ်တွေကို ဒီကောင်ကြီးက မြန်ဆန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနေတာပါ။တခြားအခိုင်းအစေကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Linux တို့ Mac တို့ရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာက Windows ပဲအသုံးများ ပါတယ်။ အခု ပွတ်ဖုန်း တွေမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Android ကလည်း Jelly Bean ဆိုတဲ့ Generation အသစ်ကို နောက်လာမဲ့ Notebook တွေမှာ တင်ပြီး ဈေးကွက်ကို တင်တော့မှာပါ။
ဒီWidowsဆိုတဲ့ကောင်ကြီးရဲ့သမိုင်းကတော်တော်ရှည်လျားပါတယ်။ဒီဟာ ကြီးကို Bill Gate ဆိုတဲ့ လူကြီးကမွေးဖွားပေးခဲ့တာပါ။
အစပိုင်းမှာ ဒီ window ကို ၁၉၈၅ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလောက်က DOS version(Disk Operating System) နဲ့စတင်ခဲ့တာပါ။Windows 1.0,Windows 2.0,Windows 2.1x,Windows 3.0,Windows3.1x ဆိုပြီးထွက်ခဲ့တာပါ။ဒီWindows version တွေက DOS ကိုအခြေခံထားတာပါ။အဲ့ဒီတုန်းကဆို computer သုံးရင် အခုလောက်မလွယ်ပါဘူး။ DOS command code တွေကိုသိမှသုံးလို့ရတာပါ။Start button တို့ အခုDestop ပေါ်က Icon လေးတွေတို့ဘာမှမပါပါ ဘူး။Screen မည်းမည်းကြီးပါပဲ။ အခု command prompt လိုပါပဲ။(keyboard ကနေ window key နဲ့ R နဲ့ တွဲနှိပ်လိုက်ပါ။ပေါ်လာတဲ့ Box မှာ cmd လို့ရိုက်ပါ)ပေါ်လာတဲ့ဟာကြီးက command prompt ပါပဲ။
နောက်ကျတော့ Microsoft က လွယ်အောင်ဆိုပြီး GUI(Graphical User Interface)ဆိုတာကိုထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။GUI ဆိုတာက computer နဲ့ user အကြား သုံးစွဲရလွယ်ကူအောင် ပြုလုပ်ပေးတာပါ။အခုအားလုံးနှိပ်နေရတဲ့ icon တွေ နာရီ တွေ button တွေကို GUI လို့ခေါ်ပါတယ်။
GUI ကိုတော့ Windows 95 ကနေစပြီး အခု Windows7ထိ သုံးစွဲနေပါတယ်။Windows 95 က နာမည်အတိုင်း ၁၉၉၅ မှာထွက်တာပါ။
Windows 95 နောက်မှာ Windows 98,Windows 2000 ဆိုတာတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေက သိပ်လူသုံးမများခဲ့ပါဘူး။
Windows XP ထွက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ Microsoft ကြီးလျှမ်းလျှမ်းတောက်သွားပါတယ်။
Windows XP ကိုတော်တော် လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိလဲ သုံးနေကြပါတယ်။
Windows XP နောက်ပိုင်းအားလုံးသိကြတဲ့ Windows Vista ကြီးထွက်ပါတယ်။တော်တော်နာမည်ကြီးပါတယ်။ကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ တော်တော်ကြီးက်ိုဝေဖန်ခံလိုက်ရလို့ပါ။ဒီWindows Vista ကိုတင်ရင် ကိုယ့်Computer ရဲ့ Hardware ပိုင်းကိုပါ အဆင့်လိုက်မြှင့်ရမှာပါတဲ့။ရေမပေါတဲ့ လူတွေကတင်းတာပေါ့ဗျ(woowarr လည်းပါပါတယ် :D)။Microsoft လည်းဝက်ဝက်ကွဲအရှုံးပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
တော်တော်ပြောဆိုခံရပြီးချိန်မှာတော့Microsoft က မခံဘူးကွဆိုပြီး Windows7ကို ထပ်ထုတ်ပါတယ်။ဒီ Windows ကတော့ Hardware Upgrade မလိုတော့ပါဘူး။ Windows တင်ရာမှာ ရက်ရက်စက်စက် ကိုမြန်လွန်းပါတယ်။ Windows XP မှာ window တင်ချိန် တစ်နာရီ လောက်ကြာပေမဲ့Windows7မှာတော့နာရီဝက်လောက်သာကြာပါတယ်။window တက်ချိန်လည်းအရမ်းမြန်ပါတယ်။Security ပိုင်းကိုလည်း အကောင်းဆုံးလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။Interface လည်းတော်တော်လှ အောင်လုပ်ထားပါတယ်။Windows versionတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးလို့လည်းဆိုပါတယ်။
ဒီ7ကြီးတောင် အားရအောင် မသုံးရသေးဘူး အခုနောက်ဆုံး Windows 8 ထွက်နေပြန်ပါပြီ။လုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်။Window7နဲ့တောင်ဘာမှမဆိုင်တော့ပါဘူး။ window တက်ရင် လေးထောင့်တုံးကြီးတွေနဲ့ပဲမြင်ရမှာပါ။ပွတ်ဖုန်း(Touch phone)တွေ ကျောက်သင်ပုန်း(Tablet)တွေအတွက် အဓိကထားထုတ်တာနဲ့တူပါတယ်။အချို့လည်းသုံးနေကြပါပြီ။ကိုယ့်စက်မှာတင်ချင်ရင်တော့ ဆိုင်တွေမှာရနေပါပြီ။(ဒါနဲ့ ပြောရအုံးမယ် ၂၀၁၃ ကြရင် software တွေအတွက် Privacy law လာပြီတဲ့။တစ်ခွေ ၅၀၀,၁၀၀ဝ ရတုန်းဝယ်ထားနော်။ woowarr လည်းအားကြိုးမာန်တက် ဝယ်စုနေပါပြီ :D)။
နောက်တာလား..ကိုကြီး ရူး ရဲ့…ကျွန်တော်လဲ တတ်သလောက်လေး တင်ကြည့်တာပါ….
အီး အီး အီး
စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာ GUI ကို အရင်ဆုံးစတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့
OS က Windows မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါ
ကွန်ပျူတာလောကမှာ GUI နဲ့ အသုံးပြုသူများ
အဆင်ပြေခဲ့သူက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပန်းသီးတခြမ်းကိုက်ကြီးပါနော်
ကျွန်တေ်ပြောဖူးသလို အနုပညာဆန်သော ပန်းသီဖန်တီးရှင်များရဲ့ လက်ရာတစ်ခုပါ
Microsoft က GUI ကို ထည့်သွင်းခဲ့တယ်လို့ပြောတာပါ…စတင်တီထွင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး…စတင်အသုံး ပြုခဲ့တယ်လို့လည်းမရေးခဲ့ပါဘူး..ကြောင်ကြီးရေ…
နောက်တစ်ခုက ကြောင်ကြီးက အခြားတစ်ယောက်ပါ
Apple ကလည်း ပထမဆုံး မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ..ဇီးရော့စ် က ပထမဆုံး ဆိုရမယ်..
Xerox Alto computer အတွက်ပေါ့။ အဲဒီ ဂျီယူအိုင် အကြောင်းပြောရရင်
ရှည်မယ်..လောလောဆယ် ဝီကီမှာပဲ ဖတ်ကြည့်ပေါ့။
ခ် .. သုံးသာသုံးနေတာ ဘာသမိုင်းကြောင်းမှမသိခဲ့ဘူး … ခုတော့ နည်းနည်းတော့ သိလာပြီ .. ကျေးကျေး ။
ဝင်ပြီး ရှုပ် ရကောင်းနိုး၊ ဒီ အတိုင်း နေရ ကောင်းနိုး နေရင်းနဲ့ နောက်ဆုံး တော့ ဝင်ပြီ အေ။ ;-)
တစ်ခါ က အရီး ပါးစပ် အဟောင်းသား ဖြစ်ခဲ့ ရတဲ့ သတင်း လေးကို ရွာထဲ မှာ မျှ ထားခဲ့တာလေးပါ။
ထပ်ပြီး အားပေးကြပါဦး။ :-)
အရီးပိုစ့်ကို ဖတ်တုန်းက ကျွန်တော် မမန့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးထင်တာပဲ…
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်… အရီးလတ်ကို ကျွန်ပျူတာသမားမှန်းသိလိုက်ရလို့…
အဲဒါကြောင့်လဲ ပိုပြီးခင်မိတယ်ဆိုရင် မမှားပါဘူးအရီးရယ်…
အရီးရေ… ပြူတင်းပေါက်တော့ ငြင်းစရာတွေလုပ်လာပြန်ပြီ… ကြုံရင် အရီးတို့ရဲ့ ပလက်ဖောင်းလေးကို ရှင်းပြဦးနော်…
အရီး ကို ကွန်ပျူတာသမား ဆိုတာထက် ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် လို့ တောင် ပြောချင် ပါတယ် ဗျာ။
ကျနော်ကတော့ ပါးစပ် အဟောင်းသားက နေ ပြော ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ အထိ ရအောင် ကြိုးစား လေ့လာ နေဆဲ ပေါ့။
ဒီမှာ လဲ လာပြန်ပြီ။
တစ်ယောက် က မယုံသကာင်္ သံ နဲ့။
တစ်ယောက် ကလဲ အိုနေပြီ လို့ သွယ်ဝိုက်ပြော။
(ငိုသံပါကြီး ဖြင့် ပြောသည်)
(မျက်ရည် များ မဆည် နိုင်တော့ အိ အိ အိ)
(မောင်ဂီ ဆီက ဓာတ် ကူးသွားသည်)
(တစ်နေ့လုံး အလုပ်မှာ ခေါင်းစား နေခဲ့ လို့ ရွာ ထဲ မှာ လာပြီး နောက် နေတာပါ။
တော်ကြာ ဒီ အဖွားကြီး ကြောင် နေပြီ လို့ ထင်မှာ စိုးလို့ )
ပရောဂ မှန်လို့ တုန် ဆင်းလာတယ် ပြောဦးမယ်…
တကယ် ပေါင်းခဲ့တာက ပြတင်းပေါက်ကိုးဗျ …
မဟုတ်ဘူးဗျ … လွဲနေတယ်..
လင့်တွေ သွားမတူးခင် အနီးစပ်ဆုံး
ဖြစ်စဉ် တခု ထုတ်ပြရရင်…
၉ရ ခုနှစ်မှာ ပန်းသီးကို ဂျော့ပ်စ် ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ ဘီလ်ဂိတ်ဟာ ကမာ္ဘ့အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပြီး
ဝင်းဒိုးအိုအက်စ်ဟာ မိုနိုပိုလီ ကစားနေနိုင်ပါပြီ..Windows 95 ကတည်းက လူသုံး အလွန်များခဲ့တာပါ…
Windows 98, 98SE, ပြီးတဲ့အခါမှာ 2000 က နေ 2000SE ပုံစံ Windows ME ကိုသွားခဲ့ပါသေးတယ်
XP မသွားဘဲ … ME နဲ့ 98SEနဲ့ အချိန်အတော်ကြာ တောင့်ခံခဲ့တဲ့လူတွေ များခဲ့ဖူးပါတယ်….
XP ဝက်ဝက်ကွဲ အောင်မြင်တာတော့ အမှန်ပါ… အောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းတွေကတော့…
ကို မျက်ရည် …ကျေးဇူးအထူးပါ…အခုလိုထောက်ပြပေးတဲ့အတွက်.
အခု ပြူတင်းပေါက်နဲ့ ပန်းသီးကို ငြင်းဖို့တစ်ယောက်ရပြီလားမသိနော်…
“Windows 95 နောက်မှာ Windows 98,Windows 2000 ဆိုတာတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေက သိပ်လူသုံးမများခဲ့ပါဘူး။ ”
ဆိုရင်တော့မှားပါတယ်။ Windows ME ကိုပြောတယ်ဆိုရင်တော့ မှန်ချင်မှန်နိုင်အုန်းမယ်။ ကျွန်တော်ဆို Windows 98 SE ကို တော်တော်ကြာအောင်သုံးခဲ့သူပါ။ xp ထွက်ပြီးတော်တော်ကြာတဲ့အထိကိုသုံးခဲ့တာပါ။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာကတော့ မြန်မာပါပဲ
အင် … ၂၀၁၃ လား …. ဂယ်ကြီးလား … တစ်လကို ၅ ခွေလောက်စုထားမှ ….